အလုပ်အောင်မြင်ဖို့ဒါတွေလိုတယ် – Live the Dream
ကဲ…အလုပ်..လုပ်နေတာကြာပြီ လစာလည်းမတိုး ရာထူးလည်းမတိုး သူဋ္ဌေးကလည်း အဖက်မလု ပ်သလိုဖြစ်နေကျပြီလား?
ကိုယ်တွေဆီမှာ သင့်တော်တဲ့အလုပ်ရဖို့က လှည်းတန်းမှာ မီးပွိုင့်မိသလိုပဲ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကို….စောင့်နိုင်မှ အဲ့တော့ရတဲ့တစ်ခုကိုပဲ အဆင်မပြေတောင် ကျိတ်မှိတ်ပြီး မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာနမ်း နေရတယ်မလား…
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ တကယ်တော့ အများကြီးပါ သူသူငါငါ နာကျင်နေကျတဲ့သူတိုင်ပါပဲ
ဒါကြီးကို ပြေလည်ဖို့က ထိုင်စောင့်နေလို့မရဘူး ( စောင့်နေလည်း ကိုယ်သာ အိုသွားမယ်..အပြောင်းအလဲဖြစ်မယ်တော့မထင်)
အဲ့တော့ ကိုယ့်ဘက်က အရင်စပြင်သင့်ပါတယ်( ကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာ နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးညံ့လိုပါလို့ ထိုင်ပြောနေမယ့်အစား အပြစ်တင်နေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘာသာ စတင်ပြီးပြင်သင့်ပါပြီ)
ကိုယ့်မှာ အောက်ကဟာတွေရှိရင် အလုပ်ရဖို့ ရာထူးတိုးဖို့ မခက်ပါဘူး
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သင်တန်းကြီးတွေတက်ပြီးမှရမယ့် ဟာတွေမဟုတ်ပါဘူး လူတိုင်းသိပြီး သတိထားဖို မေ့နေကျတာပါ …ပြီးအောင်တော့ဖတ်ကြည့်နော်…အဲ့လိုကျော်ကျော်ဖတ်လို့လည်း အဲ့ဒါတွေကို သိရက်နဲ့မေ့ကျတာ..
တကယ်ကြီးကို အရေးကြီးဆုံးနေရာက ပါဝင်နေတာပါနော်
ကိုယ့်အတိတ်ကိုပဲ စဉ်းစားကြည့်..ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ညံ့ခဲ့လို့ အခွင့်အရေးဘယ်နှခုလောက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရလည်း…ေ-ာက်ခွက်မကြိုက်လို့ ေ-ာက်ဖက်မလုပ်ဘူးဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ညံ့ဖျင်းအောင်လုပ်နေတဲ့အကျင့်ကို cover ပေးတဲ့ သဘောပါပဲ( အငယ်ဆုံးသား၊ သမီးတွေ အဖြစ်များတယ်)
ကလေးဆန်လွန်းပါတယ်….အလုပ်ခွင်မှာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူး ..
စိတ်လိုက်မာန်ပါလည်း မပြောရသလို ကိုယ်ပြောချင်တာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမပါဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြောတတ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်…
အများနဲ့ ပြောတတ်ဆိုတတ် အရေးအသားလည်းကောင်းမွန်….သူဋ္ဌေးနဲ့လည်းပြောတတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့လည်းအဆင်ပြေ…..ကိုယ်သာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်
၂၊ အများနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တတ်ခြင်း အသင်းဖော်စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်း
အလုပ်မှာ မပြောနဲ့ ဂိမ်းဆော့ရင်တောင် teamwork အသေအလဲလိုအပ်ပါတယ်
Dota ခုတ်မလား ML ပဲဆော့မလား pubg ပဲ တိုက်မလား teamwork မရှိရင် ever defeat နေမှာပါပဲ
ကိုရွှေမြန်မာတို့အားအနည်းဆုံးကလည်း အသင်းအဖွဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါပဲ (စနစ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်)
နောက်ပိုင်းအလုပ်ခွင်တွေမှာ teamwork က အသက်ပဲ အသင်းလို့ခံစားပြီးလုပ်ရင် အလုပ်နဲ့တောင် မတူတော့ပါဘူး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖေးမကူညီပြီး အသင်းကောင်းစားရေးက ကိုယ့်ကောင်းစားရေးလိုဖြစ်သွားရင် အလုပ်မှာမပျော်တာ ပိုက်ဆံအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေမရှိတော့ပါဘူး
အဲ့လို စိတ်ဓာတ်မျိူးက ကိုယ်က စမွေးရမှာပါ မိမိကစ အလုပ်ခွင်တစ်ခုလုံး team ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးပေါ်လာမယ်လို့ စိတ်ကူးပြီးကြိုးစားကြည့်ပါ
Teamwork ကောင်းဖို့က interns တွေလိုက်ဆင်းတာမျိုး အားကစားတစ်ခုခု ကစားကြည့်တာမျိုး (ဂိမ်းဆော့ရင်လည်း teamwork ကောင်းအောင် လေ့ကျင်လို့ရ) volunteerလုပ်တာမျိုးတွေ စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ဘာသာ မွေးမြူလို့ရပါတယ်
စားပါ သောက်ပါ သင်ယူပါ
၃၊ problem-solving skill ( ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း)
အလုပ်မှာပဲ အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော် ကိုယ့်တစ်ဘဝလုံးမှာ အဲ့ဟာလေးက တော်တော်အရေးပါတယ်
လူပျော့လူညံ့ဆိုတာ အဲ့တာမရှိတဲ့သူတွေခေါ်တာ ( ဗလ ရှိလည်း အဲ့ဒါမရှိရင် လူပျော့လေးပဲဖြစ်နေမှာပဲ)
ပြဿနာတွေ့ရင်း ထွက်ပြေးတယ် ခေါင်းရှောင်တယ် စွန့်စားပြီးမလုပ်ရဲဘူး အဖြေမရှာဘဲ အကြောင်းမရှိဘဲ လန့်နေတယ် သေသေချာချာမတွေးနိုင်ဘူး ( လန့်ဖြတ်နေတာကို)…ဒါတွေက အလုပ်ခွင်မှာ အထက်နဲ့အောက် ကွာစေတယ်…
ပြဿနာဆိုတာ အောင်မြင်ဖို့လမ်းစ….တကယ်လို့ ကျရှုံးသွားရင် သင်ခန်းစာယူစရာရမယ် အောင်မြင်သွားရင် တစ်ဆင့်တက်သွားမယ်….ပြဿနာတွေ့ရင် ပျော်တောင်ပျော်သင့်သေးတယ်…ဘဝဆိုတဲ့သဘောကိုက ပြဿနာတွေကို series လိုမျိုးဆက်ထားတယ်လေ…
ကြောက်လန့်နေလို့ ဘာထူးမလည်း……ပြဿနာတိုင်းမှာ အဖြေရှိတယ်….ကြည့်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ် ဒီဘက်ကနေ အဖြေမတွေ့ရရင် နောက်တစ်ဖက်ကနေ ပြောင်းကြည့်ပေါ့…အဖြေတွေ့တဲ့သူက ထိပ်ရောက်တာပဲ…သောကတွေများပြီး အဖြေမတွေ့တာက ဘယ်သူ့မှာမှ အကျိုးမရှိပါဘူး
၄၊ ကိုယ့်ဘာသာ စတင်လုပ်ဆောင်တတ်ခြင်း
သူများပြောမှ သူများခိုင်းမှ လုပ်တာက မကောင်းဘူးဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက နားရည်ဝခဲ့ကျပါတယ်
တချို့ကိစ္စတွေက ပြောမှ လုပ်သင့်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုးတက်ဖို့လုပ်ရမည့်အရာတွေ အခြေခံလူကျင့်ဝတ်တွေ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားအလုပ်တွေကတော့ သူဋ္ဌေးကခိုင်းမှ အထက်လူကြီးကခိုင်းမှ လုပ်တာတွေက ကိုယ့်ကို မအောင်မြင်စေတဲ့ အချက်တွေပါပဲ
ဆယ်တန်းအောင်ဖို့မလိုဘူး အလိုက်သိဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာပါပဲ
ကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုရှာ ပြီးရင်ကိုယ့်ဘာသာကြိုးစားပြင်….အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့က တော်လာကျတာပါ
ဗရုတ်သုတ်ခလုပ်ရင် ဗရုတ်သုတ်ခပဲ ဖြစ်နေမှာပဲ…
အလုပ်ခွင်ကို အပူသည်ရုပ်နဲ့လာ.. ဆံပင်ကဘုတ်သိုက် အလုပ်ချိန်က နောက်ကျချင်သေး…
အဲ့လိုဆို သေချာတယ်…ရာထူးတိုးဖို့ဆိုတာ မိုးနဲ့မြေလိုကွာနေမှာပဲ….
အချိန်တိတိကျကျ ( အလုပ်ဆင်းချိန်ကျ အသေတိကျတာ) သပ်သပ်ရပ်ရပ် လုပ်ပုံကိုင်ပုံကလည်း စနစ်ကျ…
အလုပ်စဝင်ကတည်းက တစ်ခုပဲလုပ်တတ်တယ် အချိန်တွေသာကြာလာတယ် အဲ့တစ်ခုကလွဲ ဘာမှ မလုပ်တတ်ဘူး…..ဘာမှလည်း သင်ယူလိုစိတ်မရှိဘူး…အဲ့လိုဖြစ်နေမှတော့ ဘယ်တိုးတက်မလည်း
အလုပ်ထဲကနေလည်း တတ်နိုင်သလောက် သင်ယူရမည် အလုပ်အားချိန် အလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာလည်း သက်ဆိုင်တာတွေ လေလာသင်ယူနေရင် တိုးတက်ပြီပေါ့…အချိန်ခဏစောင့်ရုံပဲ…
ကိုယ့်အတွက်လိုမည့်ဟာတွေ သင်ယူပြီး ဦးဏှောက်ကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းရမယ်..
စားလည်းစားပါ သောက်လည်းသောက်ပါ သင်ယူဖို့လည်းမမေ့ပါနှင့်
၇၊ နည်းပညာလည်း နောက်မကျစေပါနှင့်
သူများတွေက အလုပ်ခွင်တွေမှာ နောက်ပေါ်တဲ့ နည်းပညာတွေသုံးနေပြီ..
အရမ်းကြီးမသိတောင် Google နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ software တွေတော့ သိသင့်ပါတယ်
အသုံးမကျတဲ့ လူတစ်ယောက်လို ခံစားနေရပြီလား